सलाह भन्दा उत्कृस्ट बन्दै ह्यारी केन ! को बन्दै छ यो सिजनको बादशाह ? हेर्नुहोस यस्तो छ भविष्यवाणी - Experience Best News from Nepal
इंग्लिश प्रिमिएर लिग २०१८-२०१९ का निम्ति इंग्लिश प्रिमिएर लिगको ४ खेल सम्पन्न भैसकेका छन् र प्रिमिएर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडका डी,जिय देखि चेल्सीका मारिजियो सारीको नया खेल शैली र नया प्रकरण हेरिसकेका छौ। सिजनको लिगमा उत्कृस्ट स्थान हात पार्ने देखि लिएर प्रिमिएर लिगबाट रेलिगेशन रोक्नेसम्मका चलखेलहरु सुरु खेल देखिनै बुज्न र देख्न सकिन्छ।
यस्तै शिलशिलामा यो सिजनमा को प्रगाड बन्दै छन् र कसको आवस्था खस्कदो छ ?
यसै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने विश्वकप २०१८का गोल्डेन बूटका बिजेता जो इंगलैंडबाट आफ्नो खेल खेलेका थिए उनको खेलमा निकै विकास भएको र २०१७-१०१८मा प्रिमिएर लिगका गोल्डेन बूटका हकदार मोहमद सलाहको खेलमा सुधार देखिएको छैन।
ह्यारी केनको खेल परिवर्तन
साताको सुरुवातमा ह्यारी केनले क्लबका निम्ति २ गोल र एक सहायता गोल गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो खेलमा निकै भिन्नता ल्याएका छन् उनले आफुमा भएको पूर्ण योगलाइ दम दिने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले दाया, बाया, लामो दुरी, छोटो दुरी सबै तरिकाका किक प्रयोग गरिरहेका छन् जसको फलत केनमा नया आयामको विकास भएको खेल प्रशिक्षक साथै मिडिया बताउछन।
२०१७-२०१८मा अथक १८४ साट हानेका ह्यार्री यो बर्ष सुरुवातीमै क्लब र लिगमा आफ्नो छबी देखाउदै छन्। खेल परीक्षण कर्ताका अनुरुप केनमा मोहोमद सलाह भन्दा निकै राम्रो खेल छबी भएको बताउछन।
औसत हिसाबमा केनले २.२ सट हर खेलमा प्रहार गरेको पाइएको छ, गोल सट भएका कारण उनको हर खेलमा निकै ठुलो भूमिका रहेको पनि पाइन्छ। यसका साथै विश्वकप २०१८ रस्सियामा समेत केनको गोल सट ०.७५ प्रतिशत हर खेमा रहेको थियो।
हर खेलको ९० मिनेटमा देखियको केनको गोल सटको औसत यस चित्रमा देखाईएको छ::
पहिले जस्तै खेल देखाउन सकेका छैनन सलाह
मोहमद सलाह जो इंग्लिश फुटबलका मात्रै न भएर इजिप्टका समेत सान रहेका छन्, उनि यस अगीका इंग्लिश प्रिमिएर लिगका गोल्डेन बूटका बिजेता समेत हुन् यसका साथै उनि पहिलो खेलाडी भने जसले ३८ खेलमा ३२ गोल गरेका थिए। तर यो सिजन सलाह थोरै ढिला चलिरहेका छन्।
सुरुमा सलाहको २ गोल र एक गोल सहायताले उनलाई पुरानै अवस्था दिलाउछ भन्ने थियो तर पहिले झैँ उनि मौलाउन पाएका छैनन। उनि खेलमा दर्शकका निम्ति उदहारण खेलाडीका नाममा गनिएका छन् तर खेलमा गोल अंक बटुल्न भने सकेका छैनन।
सिजनको सुरुवातमै सलाहले ५ सबै भन्दा ठुला अवसर गुमाउन पुगेका छन् र जसमा सिर्फ 1 गोल गर्न सफल छन् ५ अवसरबाट। यस अनुपात सलाह ४३ खेलमा सिर्फ २० गोलमात्रै गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।
यी दुवै खेलाडीको खेल यो साता शनिबार ५:१५ मा देख्न सकिन्छ।
स्वारेज हटाई दीर्घकालीन रुपमा ह्यारी केन माथि नजर लगाउदै – बार्सिलोना